134 notiliana, ka nahitana tranga iray tany Mahajanga, ary 17 kosa ny tany Toamasina. Mpiasa iray ao amin’ny ministeran’ny Fitsarana Antananarivo, namita iraka tao Mahajanga nanomboka tamin’ny 11 mey 2020 ilay iray voamarina tamin’ny fitiliana natao fa mitondra tsimokaretina, ary tsy nahitana soritr’aretina izy, hoy ny tatitra nataon’ny Pr Vololontiana Hanta. Nitondra fanintsiana kosa ny minisiteran’ny Fitsarana, fa “nformaticien” nametraka rindram-baiko na “logiciel” tany amin’ny Fitsarana Mahajanga izy io. Natao fitiliana ireo mpiasan’ny fitsarana saingy tsy nisy voa, raha ny fampitam-baovao. Norarahana fanafody ny fitsarana tany an-toerana. Nandraisana fepetra avy hatrany ka nakarina aty Antananarivo ny alin’ny alahady 17 mey kosa io olona io, vao fantatra ny valin’ny fitiliana azy ary tsaboina ao amin'ny CHU Anosiala. Narahina mpitandro ny filaminana ny diany miazo ny renivohitra ; ireo namany kosa dia mbola arahi-maso akaiky ao Mahajanga. 322 ny olona voan’ny coronavirus hatreto. Misy sitrana 5 tany Toamasina, ka 119 izany ny fitambarany, ary 203 kosa no manaraka fitsaboana. Ny anankiray amin’ireo marary sisa no misy fahasarotana (forme grave) eny amin’ny Hopitaly Anosiala, izay efa mihatsara, saingy mbola ampiasana “oxygène”. Ankoatra an’i Mahajanga, dia misy tranga ahiana ho izy atahorana ary miandry valin’ny fitiliana any Ambatondrazaka.